Usale kakuhle 'ngeYurophu engenamda'? IDenmark iseta ukukhangelwa kwemida kumda waseSweden
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Usale kakuhle 'ngeYurophu engenamda'? IDenmark iseta ukukhangelwa kwemida kumda waseSweden
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zaseDenmark zokuPhula • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • Xanduva • Safety • Iindaba zaseSweden eziQhekezayo • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Oktobha 11, 2019
Umphathiswa Wezobulungisa waseDenmark uNick Haekkerup ubhengeze namhlanje e Copenhagen ukuba ilizwe liza kuseka iitshekhi zomda wangaphakathi kumda kunye Swiden ukuqala kwinyanga ezayo.
Eli nyathelo liza emva kokuba abemi baseSweden babekwa ityala lokubandakanyeka kuqhushumbe ngaphandle kweArhente yeRhafu yaseDenmark ngo-Agasti
Inkulumbuso uMette Frederiksen uthe ngelixesha urhulumente wayecinga ngokuqinisa ulawulo kumda wakhe neSweden.
IDenmark iqhagamshelwe eSweden ngebhulorho yaseOresund kumgama oziimayile ezili-10. Amawakawaka abemi abaphuma kula mazwe mabini bawela umda yonke imihla ngololiwe nangemoto. Omabini la mazwe angamalungu e-European Union.